Ungasenza njani isicelo se-AJAX ngejQuery ye-HTML5 kunye ne-CSS3 Programming
Eyona njongo iphambili yethala leencwadi le-AJAX njenge-jQuery kukwenza lula izicelo ze-AJAX ze-HTML5 kunye neenkqubo zeCSS3. Kunzima ukukholelwa ukuba kunokuba lula njani nge-jQuery.
Uyifaka njani ifayile yokubhaliweyo ngeAJAX
Jonga le khowudi icocekileyo:
I-HTML icocekile kakhulu. Yenza ngokulula i-div engenanto ebizwa ngokubaimveliso.
Lo mzekelo usebenzisa i-AJAX, ke ukuba ayisebenzi, unokufuna ukukhumbula ezinye iinkcukacha malunga nendlela esebenza ngayo AJAX. Inkqubo esebenzisa iAJAX kufuneka iqhutywe kumncedisi wewebhu, hayi kwifayile yendawo kuphela. Kwakhona, ifayile efundwayo kufuneka ibe kwiseva efanayo nenkqubo yokwenza isicelo se-AJAX.
Inkqubo ye-umthwalo ()Indlela echazwe apha ilungele imeko esisiseko apho ufuna ukulayisha isicatshulwa esicacileyo okanye ikhowudi ye-HTML kumakhasi akho.
Ukwakha i-CMS yendoda elihlwempu nge-AJAX
I-AJAX kunye ne-jQuery kunokuba yindlela eluncedo kakhulu yokwakha iiwebhusayithi ezifanelekileyo, nangaphandle kwenkqubo esecaleni. Rhoqo iwebhusayithi isekwe kuthotho lwezinto ezincinci ezinokuthi zitshintshwe zisetyenziswe kwakhona. Ungasebenzisa AJAX ukwakha isakhelo esivumela ukusetyenziswa ngokulula kunye nokulungiswa komxholo wewebhu.
Nangona kungekho nto iyothusayo malunga nephepha ngokwembono yomsebenzisi, ukujonga ikhowudi kunokubonisa isimanga:
CMS Using AJAX
yongeza uhlalutyo lwedatha ukugqwesa
I-pepto bismol ilindle emnyama
isetyenziselwa ntoni i-pepcid
Umahluko phakathi kwe-potassium citrate kunye ne-potassium gluconate
Iindleko ze-saxenda kwi-walmart
Ungayisebenzisa njani i-glycerin suppository